Intel ga-amacha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nhazi ya ka ọ kwụsị Specter na Meltdown | Akụkọ akụrụngwa
Esemokwu ahụ nọgidere na-ama jijiji Intel, asịrị banyere nchekwa nchekwa nke nwere ike imetụta ngwaahịa ha gburugburu ụwa ma belata ụzọ ha si arụ ọrụ na kọmputa na-enye ọtụtụ ndị ọrụ ọrụ ọenụ. Kpamkpam a na ozi ọma enwetara Intel na obere awa, ọdịda nke PC ahịa na ya ogbenye mmegharị ụwa nke mobile telephony na-ewere ya ọnụ ọgụgụ.
Dabere na ozi ndị ọrụ, Intel ịmachi ndị nhazi niile na-erughị afọ 5 site na njedebe nke ọnwa iji kwụsị Meltdown na Specter, na anyị edochabeghị anya ma etu a ga-esi metụta ngwaọrụ ochie.
Agbanyeghị na onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Brian Krzanich, ekwuola na 90% nke ndị nrụpụta ihe na-erughị afọ ise emetala emelitere na ngwugwu nke doziri nsogbu a, Ya onwe ya ahuwo ihe kwesiri ka o gwa ndi oru nta akuko na Intel gaje ijide n’aka na 10% fọduru nwetakwara mmelite ya ka ewe ghara ịdagide nsogbu nchekwa uwa niile nke anyi zutere. Na usoro iwu, nke a bụ etu esemokwu ahụ ga-esi kwụsị na nchedo nchekwa a ga-emechi kpamkpam, opekata mpe onye na-edozibeghị nsogbu ahụ enweela oge.
Nkatọ bụ na mmelite ndị a nwere ike belata ikike nke nhazi ma ọ bụ na-emetụta arụmọrụ, ọkachasị nke ndị okenye, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% nke ngụkọta, ya mere ha hapụrụ onwe ha:
Anyị na-atụ anya na ụfọdụ ga-enwe mmetụta ka ukwuu karịa ndị ọzọ, yabụ anyị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ iji belata mmetụta na-arụ ọrụ karịa oge.
Anyị enweghị ihe ọzọ ma ọ bụghị ime ngwa ngwa iji melite ngwaọrụ anyị ma dozie maka ihe ha na-enye anyị ma gbalịa ichebe onwe anyị na ngwaọrụ anyị nwere na mkpịsị aka anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Intel ga-amacha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nhazi ya ka ha kwụsị Specter na Meltdown